नेचर्स वे नेपालमा - आउटलेट - नारी
नेचर्स वे नेपालमा
अस्ट्रेलियाली औषधि आयात गर्ने कदमस्वरूप डा. साथीले अस्ट्रेलियाको फर्माकेयर ल्याबोरट्रिजसँग सहकार्य गरेको छ । फलस्वरूप नेचर्स वे ब्रान्डका उत्पादनहरूको बिक्री–वितरण नेपालमा प्रारम्भ भएको छ ।
उक्त अस्ट्रेलियाली कम्पनीसँगको पहिलो चरणको साझेदारीअन्तर्गत किड्स स्मार्ट प्रोबायोटिक ड्रप्स, भाइटा गमिजस भिटामिन सी जिङ्क, किड्स स्मार्टस क्याल्सियम : भिटामिन डी थ्री, भाइटा गमिजस मल्टी भेजिज, किड्स स्मार्टस ओमागा–थ्री फिस ओयल हाई डिएचए तथा किड्स स्मार्ट भाइटा गमिजस मल्टी भिटामिन नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा फर्माकेयरका धेरै शाखा छन् । यो कम्पनी सुस्वास्थ्य तथा आरोग्यताका माध्यमबाट मानिसहरूको जीवनलाई अझ राम्रो, उत्कृष्ट, स्वस्थकर तथा खुसी बनाउन उत्प्रेरित गर्नतर्फ समर्पित छ ।
चैत्र ११, २०७५ - डा. साथीले नेपाल ल्यायो अष्ट्रेलियाको नेचर्स वे ब्रान्डका उत्पादनहरु
माघ ८, २०७५ - नेपालमा संगीतिक जीवन